usa(usa) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
मंसिर १२ देखि सानिमा इक्वीटीको आइपीओ, लगानीका लागि न्यूनतम १ हजार भए पुग्ने
मुद्रास्फिति ३.१% मा सीमित
देश शोधानान्तर बचतमा, अर्थतन्त्रमा आशावादी परिदृश्य
नेपाल लाइफको चन्द्रगढी उपशाखाको उद्घाटन
बिमानमा ल्यापटप बोक्न नदिने तयारीमा अमेरिका !
काठमाण्डौ । अमेरिकी अधिकारीहरुले चरमपन्थीहरुको खतरालाई मध्यनजर गर्दै सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरुमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुले साथमा ल्यापटप राख्न नपाउने नियम लागू गर्ने बिषयमा तयारी थालेका छन् । बीबीसीका अनुसार अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागका प्रमुख जोन केलीले भनेका छन् कि चरमपन्थीहरुले कुनै अमेरिकी विमानलाई बमले...
अमेरिका जान चाहनुहुन्छ ? यी ६ गल्ती नगर्नु, सहजै मिल्नेछ भिजा
काठमाण्डौ । अमेरिका विश्वभरका युवाहरुको सपनाको देश हो । धेरै मानिसहरु सपनाको देश तथा यहाँको सहर अनि सौन्दर्य कस्तो होला भनेर समेत जान र गएर अध्ययन गर्न चाहन्छन् । तर, सपना देख्ने सबै अमेरिका पुग्न सक्दैनन्, सबैको यो सपना पूरा हुनसक्दैन । कडा नियमका कारण अक्सर अमेरिकी दूताबासले कयौं मानिसको भिजा अप्लिकेसन नै रद्ध गरिदिन्छ । नयाँ...
अमेरिकाको सबैभन्दा अग्लो बाँध भत्कने खतरा, लाखौ मानिसले घर छाडे
काठमाण्डौ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामामा भएको भारि बर्षाका कारण देशकै सबैभन्दा अग्लो बाँध ओरिवल बाँध फूट्ने खतरा बढेको छ । बीबीसीका अनुसार खतराको आशंका बढेपछि १ लाख ३० हजार मानिसलाई आफ्नो घर खालि गरी सुरक्षित स्थानमा बस्न उर्दी गरिएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार पानी भरिएपछि ओरिवल बाँध जुनसुकै बेला विस्फोट हुनसक्ने खतरा बढेको छ...
अमेरिकामा सयौँ आप्रवासी पक्राउ, अर्को यात्रा–प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा ट्रम्प
काठमाण्डौ । गैरकाननी रूपमा अमेरिकामा बसोवास गरेको आरोपमा सयौँ आप्रवासी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले एक सातादेखि सुरु गरेको अनुसन्धान र छापाका क्रममा सयौँ आप्रवासी पक्राउ परेका हुन् । गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा रहेका आप्रवासीलाई कारबाही गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिअनुरूप आप्रवासीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको हो ।...
अमेरिकामा ग्रीन कार्ड पाउन अब कठीन, डिभी पनि बन्द हुने !
काठमाण्डौ । अमेरिकाका दुुई शीर्षस्थ सिनेटरले आप्रवासनको संख्यामा भारी कटौति गरी अहिलेको तुलनामा आधामा सीमित गर्न सिनेटमा एक विधेयक पेश गरेका छन् । यो विधेयक पास भयो भने अमेरिकाको ग्रीन कार्ड हासिल गर्न तथा अमेरिकाको स्थायी निवासी बन्ने इच्छा राख्नेहरुको सामु चुनौतिको पहाड खडा हुनेछ । रिपब्लिकन सिनेटर टम काटन र डेमोक्रेटिक पार्टीका...
ट्रम्पविरुद्ध ९७ विश्वचर्चित कम्पनीको मोर्चाबन्दी, अदालतमा रिट दायर
काठमाण्डौ । अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले ७ मुस्लिम बाहुल्य देशका नागरिकहरुको अमेरिका आगमन तथा प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने भनी गरेको निर्णयविरुद्ध ९७ वटा विश्वचर्चित कम्पनीहरुले अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन् । प्रविधिको दुनियाँका प्रतिष्ठित कम्पनीहरु माइक्रोसफ्ट, एप्पल, गुुगलसहित सिलिकन भ्यालीका ९७ कम्पनीहरुले सामूहिक...
अमेरिका जान डराए नेपाली विद्यार्थी
काठमाण्डौ । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पद सम्हालेयता उच्च शिक्षा हाशिल गर्न त्यसतर्फ जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासी सम्बन्धी कठोर नीति लिएका कारण विद्यार्थीमा अमेरिका आकर्षण घटेको हो । आइतबार अमेरिकाको नो अब्जेक्शन लेटर लिने विद्यार्थी शून्य भएपछि...
चीन–अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध हुुनसक्ने !
काठमाण्डौ । चीनको चर्चित ईकमर्स कम्पनी अलिबाबाका संस्थापक ज्याक माले अमेरिका र चीनबीचको विवाद सही ढंगले समाधान गरिएन भने दुुई देशबीच निकै ठूलो व्यापार महायुद्ध हुने बताएका छन् । उनले डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनअन्तर्गत सुरु हुने व्यापार महायुद्धका लागि दुवै देश तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने देखिएको समेत बताए । अलीबाबाका मालिकले भनेका...
‘एच वान बी भिजा’ संसोधन प्रक्रिया अमेरिकी संसदमा, गैरअमेरिकीको जागिर संकटमा !
काठमाण्डौ । नेपाल, भारत जस्ता मुलुकका दक्ष कामदारलाई अमेरिकामा हाइटेक जागिरका लागि स्वीकृति दिने ‘एच वान बी भिजा’का विद्यमान प्रावधानहरुमा ठूलो बदलावको प्रस्ताव दोश्रो पटक पुनः पेश गरिएको छ । यो भिजा प्रक्रिया तथा अधिकांश प्रावधानहरुमा बदलावको माग गर्दै दुई सांसदले अमेरिकी संसदमा विधेयक पेश गरेका हुन् । ती सांसदहरुको दाबी...
अमेरिकी अर्थतन्त्र रफ्तारमा दौडने !
अमेरिका । डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट अमेरिकी राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार हिलारी क्लिन्टनले अमेरिकी अर्थव्यवस्थाले अब रफ्तार पक्रिने बताएकी छिन् । उनका अनुसार यो रफ्तारको क्रममा यसको लाभ समाजका सबै वर्गले लिन पाउन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । हिलारीले एक चुनावी र्यालीमा भनेकी छिन्–‘केही शुभ खबर छ । हाम्रो...
ट्वीटरसहित विश्वचर्चित ३ साइटमा साइबर हमला, अमेरिकालाई तनाव
ट्वीटरसहितका केही प्रख्यात इन्टरनेट 'साइट’हरु केही समयका लागि तीन वटा साइबर हमलाबाट प्रभावित भएका छन्। प्रयोगकर्ताहरुले ‘अनलाइन’ आफ्नो ‘साइट’ पत्ता लगाउन सकून भन्नका लागि प्रयोग गरिने इन्टरनेट सेवा दिने डायन नामक कम्पनीमाथि साइबर हमला भएको हो। ट्वीटरसहितका थुप्रै ‘साइट’ डायनका ग्राहक हुन्। ट्वीटर, रेडिट, साउण्ड...
आगामी मंगलबारदेखि इडिभीको आवेदन खुल्ने
काठमाण्डौ । नेपालीमाझ आकर्षक अमेरिकी इलोक्टोनिक्स डाइभर्सिटी भिसा(इडिभी) फेरि खुल्ने भएको छ । सन् २०१८ का लागि आगामी मंगलबादेखिर इडिभी भर्न सकिने काठमाण्डौस्थित अमेरिकी दूताबासले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्ट पारेको छ । दूताबासका अनुसार आगामी मंगलबार नेपालको स्थानीय समय अनुसार बिहान ९ः४५ बजेबाट खुल्ने इडिभीको आवेदन...
आइतबार कुन कम्पनीमा खरीद र बिक्री चाप देखियो ? कसले कमाए, कसले गुमाए ?
लोमान्थाङमा बल्ल पुग्यो थ्रीजी
गौशालामा सेञ्चुरी बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर
मर्चेन्ट बैंकहरुले आफ्नो मुख्य कम्पनीको धितोपत्र निश्कासन गर्न नपाउने
गरिमा बैंकले १५% बोनस सेयर वितरण गर्ने
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले १२.८२% बोनस दिने
सोल्टी होटलको यो कन्तबिजोग: इपीएस ६ पैसा, पीई ६०६१ गुणा
वाणिज्य बैंक र फाइनान्समा बेरोजगारलाई जागिरको अवसरै अवसर
भोलिदेखि १८०० रुपैयाँ प्रतिकित्ताको सेयर सस्तोमै खरीद गर्ने अवसर
आफ्ना कर्मचारीमा यी ४ गुण खोज्छन् संसारकै धनी व्यक्ति, तपाईमा के छ ?
पैसाको बिषयमा यी ५ कुरा पत्नीलाई भन्नुहुन्न ? ठूलो घाटा हुनसक्छ !